Ronaldo oo noqday laacibkii ugu horeeyay ee taageerayaashiisa Instagram-ka ay gaaraan 100 milyan – Gool FM
Ronaldo oo noqday laacibkii ugu horeeyay ee taageerayaashiisa Instagram-ka ay gaaraan 100 milyan
Liibaan Fantastic May 4, 2017
(Madrid) 04 Maayo 2017 Laacibka kooxda Real Madrid iyo xulka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa noqday laacibkii ugu horeeyay ee barta Instagram ku yeesha 100 milyan oo taageerayaal ah.
Ronaldo ayaa uga mahad celiyay taageerayaashiisa sida ay marwalba u garab taaganyihiin, wuxuuna balan qaaday inuu si toos ah ula hadli doono isaga oo sidoo kale sheegay inuu u haayo lama filaan isla markaana uu u sheegi doono.
“Soo dhawaada asxaabta, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan gaaro 100 milyan oo taageerayaal ah, waa tiro aan macquul ahayn, waa inaan idinkaga mahadceliyaa meel walba oo aad ka joogtaan aduunka oo dhan taageerada aad ii muujiseen” ayuu ku yiri Ronaldo muuqaal uu soo duubay.
“Waxaan idiin haayaa lama filaan, goor dambe ayaan si toos ah idiinla hadli doonaa, waad u qalantaan inaan sidaas idiin sameeyo, mahadsanidiin” ayuu sii raaciyay.
AC Milan oo kaddib Musacchio markan qarka u saaran Franck Kessié (Kulan 3 saacadood socday oo xalay dhacay)
Wenger oo xaqiijiyay in Granit Xhaka uu seegi doono kulanka Man United